Horukon feature low-set, arki jidka waqtiga
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Horukon feature low-set, arki jidka waqtiga
In kombiyuutarka, iyo set iibka, waa qabsaday conserver hoolka waa in la xakameeyo kartaa heshay ka. Sida marxalad si loo ogaado boqolkiiba heshay ee,-set sare, meel dhexe, waxa la sheegay in goobaha hooseeyo yihiin. In, ugub ah oo dhacda meel hoose marka aad rabto in aad ka hor waqtiga la aqoonsado, waxaan eegi doonaa haddii ay jiraan wax sida sida wax waa. goob Low waa sababtoo ah waxaa jira wax dheeraad ah ee ra'yi ah in sida ugu badan u arkaan iyada oo si fudud la meel sare.
tusaale ahaan, mar dambe ma ay iman gaari caadi ah, oo waxaa inta badan ma iman gaadheen xataa in saacadaha gaaban shaqeeya, lahaa inta badan u fududahay in ay ka saarto heshaa Atsurichi ah, gaari bandhig yahay eexda ah waxaa lagu arki karaa oo kaliya in wax la mid ah, ayaa sidoo kale isku halaynta si lama filaan ah gaari yar in sawiri Ghanna ah, waxa loo arki doonaa fikrado badan oo la xiriira saameyn gaadho. Haddii aad eegto in sidan, meel hoose guud ahaan la mid yahay sida waxa soo socda sii kordheysa in ay ra'yi ah in ay la go'aamin karaa in qayb la xidhiidha wax soo saarka.
Markaas, calaamadaha kuwa soo socda ee ugu badan waa, xataa haddii dhibaato badan jiidaya hit weyn, waxaa si fudud u soo jiid heshay ku dhuftay yar yahay, waa in ay jiraan sidoo kale waa arrin ah ee Ghanna post in uusan maamulka Hargaysa ee saacadaha shaqada ka gaaban.
Intaa waxaa dheer, in ay dhacdo goobaha sare ama goobaha dhexe, laakiin waxay ahayd in ugub ah sida kubada waxaa la nuugo dhacdaa si ay u bilaabaan, at meesha hoose, sidoo kale gaareen kubad u dhow billowga si lid ku ah, si ay u bilaabaan arrin aan galaya, waa arrin ah dhacdaa in ilaa ambaday.
Laakiin waxaas oo kale waa, waxa ay u muuqataa wax ka mid ah run ahaantii dhacday, waa shuruud la'aan, sababtoo ah waxaa sidoo kale ku xiran tahay sixitaanka ee dhidibkii, iyo dhammaan qaadataa si loo hubiyo meel u hooseeya marka, xagga ra'yiga ka soo horjeeda in aan wanaagsanayn noqon kartaa laakiin qaar ka mid ah.